WARAR DHEERAAD AH OO KU SAABSAN DAGAALKA KA SOCDA BAYXAANI…..
Qoysk uu madfac ka diley 3-carruur ah iyo hooyadood.
Guud ahaan waxaa dagaalkan ku dhintay 20 QOf, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 30 qof
Waxaa maalintii labaad dagaal uu ka socdaa deegaanka Beexaani, wuxuuna dagaalkan uu ku faafay degmooyinka Shibis, Shangaani iyo C/casiis ee ka tirsan Gobolka Banaadir, waxaana dagaalkan uu u dhexeeyaa ilaallada Hotel-ka Global iyo maleeshiyooyin daacad u ah Bashiir Raage.
Dagaalkii shalay dhacay ayaa ahaa kii ugu qaraara ee ka dhaca muddooyinkan dambe magaallada Muqdisho, waxaana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka culus iyo midka fudud, waxaana dagaalkan la xaqiijiyey in ay ku dhinteen illaa 20-qofood, ayna ku dhaawacmeen illaa soddomeeyo kale, waxaana dadka waxyeelladu soo gaartay ay u badan yihiin dad rayid ah oo madaafiicdu ugu tagtay guryahooda.
Dagaalkan waxa uu keenay bara-kac aad u ballaaran iyadoo deegaannada aan kor ku soo sheegnay shalay la arkayay dad fara badan oo u badan carruur, haween iyo dad da’ ah oo ka soo qaxaya, waxayna qaarkood ku qaylinayeen “Ma sidan baan illaa qiyaamaha ku jireynaa…. Ilaahayoow naga soo gaar”.
Illaa iyo haatan ma jiraan wax odayaal ah oo ku kala dhex jira labada dhinac ee dagaalku u dhexeeyo, iyadoo deegaannadaasi ay gebi ahaanba ka istaageen isu socodkii gaadiidka ee gawaaridii dadweynaha, iyadoo lagu warramay in madaafiic ka soo fakatay goobaha lagu dagaallamayo ay ku dheceen xaafado kale oo ku yaalla magaallada Muqdisho, waxaana la sheegay in qoys ka koobnaa 6-ruux ay ka dhinteen 3-carruur ah iyo hooyadood.
Dagaalkan ayaa illaa iyo haatan la garanayn sababaha dhaliyey, balse mar aan la xiriirnay saraakiil ku dhow-dhow Bashiir Raage ay noo sheegeen in dagaalkaasi uu sabab u ahaa gaari C/bile ah oo marayay aga-gaarka Hotel Global lagu furay rasaas, waxaana halkaasi ku dhintay 1-ruux, laba kalena ay ku dhaawacmeen.
Dhanka kale kooxaha dagaallamaya ayaa waxaa soo gaaraya baaqyo ka imaanaya hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Xuseen Maxamed Faarax Ceydiid, Faarax Weheliye Caddow Sendiko iyo siyaasiyiin kale, waxayna soo jeediyeen dhammaantood in dagaalkan sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo, wixii khilaaf ahna wadahadal lagu dhammeeyo
Dagaal Saameeyey Muqdisho oo Dhan
7-Qof ayaa Ku Dhintay Dagaal Ka Dhacay Muqdisho
IIMAAN C/MAJIID OO MALAAYIIN HANTI AH UGA TAGTAY U DAMQASHO DAD AFRIKAAN AH!!
Gabadha caanka ah ee Soomaaliyeed ee dhinaca xayaysiinta dharka Iimaan C/majiid ayaa si lama filaan ah uga baxday heshiis ay dhowaantaan wada saxiixdeen shirkad ka ganacsata dhagaxa qaaliga ah ee loo yaqaan Diamond oo ka dhisan dalka Ingiriiska.
Iimaan ayaa shirkadaas oo lagu magacaabo De Biers ku eedaysay inay ku tumanayso xuquuqda ay leeyihiin dadka lagu magacaabo Bushman oo u dhashay dalka Botswana, dadkan oo ah dad reer baadiye ah degganna waqooyiga dalkaas.
Iimaan oo ah gabar caan ah oo hadda u dhaxda heesaaga caanka ah ee David Bowie ayaa sheegtay inay ka tagayso howshii ay u haysay shirkadda, inkastoo wargeyska dhacdadaan qoray ee Sharqal Awsad uusan sheegin shaqada ay Iimaan u hayasay shirkaddaasi.
Iimaan ayaa sannadkii la soo dhaafay bandhig xayeysiin dhinaca mujowhraadka ah u sameysay isla shirkaddan, xaflad weyn oo dhinaca aflaamta ah oo lagu magacaabo Can oo sannad walba la qabto.
IImaan ayaa shirkaddan ku eedeysay inay Diamond ay ka qodanayso deegaan ay deggan yihiin dadka Bushman-ka ah oo ka tirsan Dalka Botswana, iyadoo aan wax ogolaasho ah ka haysan dadka deegaankaas, waxayna doonaysaa shirkaddaasi ayay tiri Iimaan in ay burburiso xaqa ay u leeyihiin dhulkooda dadka Bushman-ka ah ee halkaas deggan oo qaraar ay dowladdu soo saartay ku doonaysay inay xoog kaga kiciso dadkaas dhulka ay deggan yihiin.
Iimaan wareysi ay bixisay ayay ku sheegtay in ay wax iska ay tahay in dhibaato xoog leh la gaarsiinayo dadka Bushman-ka ah oo deegaannadooda dhalan-rog lagu samey-nayo lagana barakicinayo deegaan-nadooda si ay lugaha ula galaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin Cudurka AIDS-ka, Mukhaada-raadka iyadoo loogu soo gambanayo hal-kudhig ah in hormar la gaarsiinayo.